သေပြီးတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပေမယ့် နေ့စဉ် နေ့တိုင်းမျက်တောင်တစ်ဖျက်ဖျက်ခတ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ မံမီအလောင်း - Myanmarload
သေပြီးတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပေမယ့် နေ့စဉ် နေ့တိုင်းမျက်တောင်တစ်ဖျက်ဖျက်ခတ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ မံမီအလောင်း
လွန်ခဲ့သော ၆ လ က 11:43 September 16, 2019
ကဲ... ပရိသတ်တို့ရေ ဒီတစ်ခုကတော့ သေပြီးတာနှစ်ပေါင်းစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ မံမီရုပ်အလောင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမံမီအလောင်းကောင်ဟာ အခုအချိန်ထိ နေ့တိုင်းမျက်တောင်တစ်ဖျက်ဖျက်ခတ်နေသေးတယ်ဆိုရင် ပရိသတ်တို့ယုံကြမလားပဲ။ အီတလီနိုင်ငံ Sicilyမှာ မံမီပေါင်းများစွာကို ပြသထားတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီမံမီများထဲမှာ မှန်အခေါင်းတလားနဲ့ထည့်ထားတဲ့ အပြစ်ကင်းစင်လှတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ရိုဆာလီယာဆိုသူ ၂ နှစ်သမီး အရွယ်ကလေးမံမီ အလောင်းလေးဟာ မံမီပြုလုပ်ခဲ့တာ အနှစ် ၉၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။သို့သော် ရိုဆာလီယာ ရဲ့မျက်လုံးဟာ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း အဖွင့် အပိတ် လုပ်နေကြောင်း နဲ့ မှန်အခေါင်းတလားဟာ နေရာ အနည်းငယ် ရွေ့သွားကြောင်းတွေကို အီတလီ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာမှာ ဖော်ပြ ခဲ့သလို Youtube မှာလည်း ဖော်ပြထားခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ချို့စာနယ်ဇင်းတွေမှာ ဖော်ပြရေးသားထားတာကတော့ ရိုဆာလီဇာ လေးဟာ သူမမသေသေးကြောင်းပြသနေတယ်လို့လည်း ဆိုထားပေမယ့် မနုဿဗေဒ ပညာရှင်တစ်ယောက်ကတော့ ၎င်းကလေးမံမီလေးရဲ့လျို့ဝှက်ရေးသားထားတဲလက်ရေး မှတ်တမ်းကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံမှာ ၈ သန်းသော မံမီတို့ဟာ ပုံမှန် နည်းပညာနဲ့ မပုတ်သိုးအောင် စီမံခဲ့ကြသော်လည်း 1920 ခုနှစ်မှာ အအေးမိရောဂါနဲ့ သေဆုံးခဲ့တဲ့ ရိုဆာလီယာရဲ့မံမီပြုလုပ်ပုံကတော့ဂရိုင်စလင်း၊ ဖော်မလင်၊ ဇင့်ဆာဖိတ် ကလိုရိုက်၊ စလီဆိုင်းလစ်အက်စစ် တို့ပျော်ဝင်နေတဲ့ အရက် ဒြပ်ပေါင်းကို ခန္ဒာကိုယ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
Photo Source : သံ ဇဉ် မိုးဇတ်
ဖော်မလင် ဟာဘတ်တီးရီးယားကိုသေနိုင်ပြီး ဂရိုင်စလင်း ဟာ ခန္ဒာကိုယ်ကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စလီဆိုင်းလစ် အက်စစ်ဟာ မှိုကိုသေစေနိုင်ပြီး ဇင့် ဆား ပါဝင်မှုတွေကြောင့် ကြွက်သားတွေ မာကြောစေနိုင်ကာ မှန်အခေါင်း တလားကြောင့် စိုထိုင်းဆ ကို ကာကွယ် စေနိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးဖွင့်ပိတ်မှုတွေကတော့ ဂူအတွင်း နေရောင်ခြည် ကျရောက်မှုအပူရှိန်ကြောင့် ကြွက်သားတွေ ကျုံခြင်း ကြွ ခြင်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မှတ်ချက်ချခဲ့ပြါတယ်။ ကဲ... ဒီတော့ ချစ်ပရိတ်သတ်တွေကြည့် ရဲရင်တော့ Youtube တွင် Rosalia opening her eyes. ဟုရိုက်ကြည့်ပါနော်။ မျက်လုံးဖွင်ပြပါလိမ့်မယ်....
Page generated in 0.1109 seconds with5database query and6memcached query.